Momba anay - Suzhou MENTIONBORN Industry And Trade Co., Ltd.
Suzhou MENTIONBORN Indostria Sy ny Trade Co., Ltd.
Suzhou MENTIONBORN Industry and Trade Co., Ltd. miorina amin'ny No.18, East Chenghu Road, Distrikan'i Wuzhong, Suzhou, Sina. Izahay dia nanao fanatanjahan-tena manokana amin'ny akanjo fanatanjahan-tena / akanjo mafana / fampisehoana ary fitafy mahazatra. Ny andalanay dia manarona hometostiles koa. Izahay dia miompana amin'ny mpanjifa ary mamorona soatoavina fanampiny ho an'ny mpampiasa farany. Raha toa ka manondrana any Eropa, Amerika sy Aostralia ny vokatra lehibe eto amintsika, tao anatin'ny folo taona lasa, ny fivarotanay eo amin'ny tsena anatiny dia nitombo be koa tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny Suzhou MENTIONBORN dia misy ny R&D, ny famokarana, ny fitaterana ary ny marika sns, izay soloin'ny ekipa matihanina, mahomby, mendri-kaja ary mahatoky. Hainay tsara ny manapaka ny fetra famolavolana, ny hevitra mifanohitra ary ny angano fa ny lamba an-trano sy ny fanatanjahan-tena dia tsy misy ifandraisany amin'ny lamaody. Miaraka amin'ny famolavolana matihanina, dia manolo-tena handrisika ny olona ho tia sy maniry mafy ny lamba lamba sy ny fanatanjahan-tena any an-trano. Manolora tena amin'ny fampifangaroana tanteraka ny fampiononana sy ny fomba ary manova ny fomba fiainan'ny olona. Tao anatin'izay taona faramparany izay, vokatra azo havaozina amin'ny tontolo iainana koa no vokatra mampivoatra anay. Ny fanavaozana no finoantsika hatrany. Ny departemantan'ny R & D dia miorina ao Suzhou, tena akaiky an'i Shanghai, ary mitazona hatrany ireo tamberina avy any amin'ny sisin-tsena, manatsara ny traikefan'ireo mpampiasa farany ary manome ireo mpanjifantsika vokatra lafo indrindra.
Raha ny tena izy, ireo vokatra vaovao nataon'i Suzhou MENTIONBORN dia lasa fandresen'ny sivily. Satria ny fanavaozana rehetra nataonay dia namboarina tsy manam-paharoa hifanaraka tsara amin'ny tsirairay, ary ny tena zava-dehibe dia ny mijanona ho takatry ny fotoana rehetra.
Raha vantany vao mahazo ny vokatra mety ianao dia lasa loharanom-pahasambarana anao izany!
Ny teny filamatray: teraka-MENTION ho an'ny fahasambarana!
Miorina amin'ny olona
serivisy avo lenta
Hifantoka hatrany amin'ny foto-kevitra fototra momba ny fahasalamana, fampiononana ary hatsaran-tarehy isika,
manohy mamaly ny filan'ny mpanjifa, mitarika ny fampandrosoana ny indostria.
Fanodinana santionany sy famokarana, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Lamba firakotra roa sosona, Palitao fanatanjahan-tena, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy,